Fandraisana | MyCoolClass.com
Mitadiava mpampianatra tonga lafatra hanampy anao hampivelatra ny fahaiza-manao hahomby
MyCoolClass.com dia sehatry ny fianarana virtoaly an'ny mpampianatra. Amin'ny sekolinay an-tserasera,
ho hitanao ny mpampianatra tonga lafatra hanome anao traikefa fianarana manokana tsara indrindra.
Hanampy anao hahatratra ny tanjonao izahay - manokana na matihanina. Mianatra fiteny?
Mila fampianarana amin'ny sekoly na oniversite? Te hilalao zava-maneno?
MyCoolClass.com dia manana kilasy mahafinaritra ho anao!
Mampifandray ireo mpampianatra tsara indrindra eran'izao tontolo izao izahay miaraka amin'ireo mpianatra mazoto indrindra amin'ny fahafinaretana,
toerana malalaka sy samihafa ara-kolotsaina.
Courses momba ny asa
Fitsangatsanganana sy kolontsaina
Miomàna hanana tontolo fianarana virtoaly vaovao sy mahafinaritra!
Izahay dia mamarana ny fanaingoana ny rafitry ny fitantanana fianaranay ary ny mpampianatra dia mangataka hiditra ao amin'ilay kaoperativa.
Mikasa ny hiasa tanteraka sy handray fisoratana anarana amin'ny Mey 2021 izahay.
Plaform fianarana virtoaly an'ny mpampianatra iraisam-pirenena
Ny ankizy dia ho tia ny fianarantsika mahafinaritra sy fampianarana. Manana mpitaiza amin'ny fiteny, matematika, kanto, siansa ary maro hafa izahay.
Handray anjara amin'ny taranja tsy manam-paharoa sy famoronana amin'ny fiteny, lohahevitra samihafa ny tanora
Kilasy sy taranja ho an'ny olon-dehibe
Ny fanabeazana mitohy ho an'ny olon-dehibe dia mora amin'ny mpampianatra lohahevitra tsara indrindra avy amin'ny manodidina
izao tontolo izao hanampy.
Raha te hahay hiteny frantsay ianao, hanatsara ny voambolana anglisy anao, na mila fampianarana amin'ny algebra dia afaka mahita mpampianatra tonga lafatra ao amin'ny MyCoolClass.com ianao
MyCoolClass.com dia kaoperativa iraisam-pirenena
ny mpampianatra. Ny iraka ataontsika dia ny manome izay mahaliana
ary fanabeazana manokana ho an'ny mpianatsika.
Izany dia ataontsika amin'ny alàlan'ny fananganana fifandraisana tena misy sy maharitra ary amin'ny famoronana tontolon'ny fianarana tsy manam-paharoa
mifanaraka amin'ny zavatra ilainao manokana. Amin'ny maha mpiara-miasa antsika, ny laharam-pahamehantsika dia ny mpianatsika sy ny mpampianatra,
tsy ny tombom-barotra amin'ny shareholder.
Mandresy ny rehetra!
Afaka miteny daholo ny mpianatsika sy ny mpampianatra
Misorata anarana amin'ny Newsletter anay!
Misorata anarana amin'ny mailakao ary ho voalohany mahalala ny fisoratana anarana aloha, fanavaozana ny sekoly, fampianarana vaovao, bilaogin'ny mpampianatra ary vaovao mahafinaritra hafa!
Hamarino ny mailaka
Manaiky ny hitahirizan'ny MyCoolClass.com ny mombamomba ahy aho mba hanomezana ahy famandrihana amin'ny gazety. Manan-jo hisoratra anarana amin'ny fotoana rehetra aho amin'ny fikitihana ny rohy 'esory' amin'ny mailaka.
Kitendry CookieManaiky aho